Qaramada Midoobay oo kubaaqday taageera lacageed lasiiyo dadka kunool dalalka soo koraya - Tilmaan Media
Qaramada Midoobay oo kubaaqday taageera lacageed lasiiyo dadka kunool dalalka soo koraya
in CAALAMKA, DHAQAALE
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dad badan oo kunool dalalka soo koraya ubaahan yihiin taageero lacageed oo wakhti kooban ah si wax looga qabto baahiyaha asaasiga ah ee malaayiin qof oo dunida kunool gaar ahaan dalalka awoodooda dhaqaale hoosayso.
Warbixin ay soo saartay Haya’dda Qaramada Midoobay uqaabilsan Hormarinta “UNDP” ayaa lagu sheegay in taageerada lacageed ee dalalka soo koraya lasiinayo kaliya aysan wax katari doonin cunno iyo dawo yarida balse ay kaqayb qaadan doonto yaraynta faafidda xanuunka Korona Fayras.
Warbixinta ayaa xooga saaraysa ilaalinta iyo taageeridda dadka saboolka ah, wuxuuna boorinayaa siinta deeq lacageed oo aan shuruud ku xirnayn isla markaasna wakhtiyaysan si loo ilaaliyo nolosha asaasiga ah ee 2.7 bilyan oo ruux oo kunool 132 dal oo ah kuwa soo koraya.
Taageerada dhaqaale ee kumeel gaar ka ah ee loo baahan yahay “TBI” ayaa gaaraysa dhaqaale lagu qiyaasay $199 bilyan, waxayna socon kartaa inta udhaxaysa 9 illaa 12 bilood.
“Maadaama uusan jirin caymiska shaqo la,aanta iyo sistamkii ilaalinayay nolosha asaasiga ah ee dadka, waxaa aad hoos ugu dhici doona dakhliga iyo nolosha dadka caalamka oo idil”, sidaas waxaa yiri George Gray Molina oo kamid ah qoraayaasha warbixinta.
Inkasta oo dowladaha hormray ay lacag badan galiyeen sidii loo ilaalin lahaa nolosha dadka una yarayn lahaayeen saamaynta taban ee Korona Fayras, laakiin dalalka soo koraya mahelin awood ay ku yareeyaan saamaynta xanuunka uu kuyeeshay nolosha dadka.
Dowladaha soo koraya oo awalba ladaalaa dhacayay dhibaatooyin siyaasad,bulsho iy dhaqaale, awood umay lahan in ay ka jawaabaan culaysyada uu layimid Korona Fayras ee shaqa la, aantu ugu horayso.
Caqabadaha ugu waawayn ee ay wajahayaan dowladaha soo koraya waxaa kamid ah in 10 kıı qof ee shaqaale ah 7 kamid ah ay ka shaqeeyaan shaqooyin aan rasmi ahayn ama dowladda udiiwaan gashanayn. Arintaan oo sababaysa in dad faro badan aysan helin taageero dowladeed.
Muxuu kadhigan yahay heshiiska lagu gaaray Dhuusamareeb
Madasha Xisbiyada Qaran oo ka hadashay go,aanadii shirkii Dhuusamareeb